Minisiteran’ny Indostria-Sim : niaraha-nidinika ny olan’ny orinasa Tiko 3A | NewsMada
Minisiteran’ny Indostria-Sim : niaraha-nidinika ny olan’ny orinasa Tiko 3A
Nisy ny fihaonan’ny filohan’ny Sim, Rajaonera Fredy sy ny minisitry ny Indostria, Tazafy Armand, ny 18 oktobra teo. Niompana indrindra tamin’ny olan’ny orinasa Tiko 3A ny diniky ny roa tonta. Tsiahivina fa nakatona ny 12 oktobra teo io orinasa any Andranomanelatra Antsirabe io, izay niteraka korontana tany an-toerana. Manana andraikitra lehibe miaro ny indostria eto amintsika ny Sim, ka izay indrindra ny antony nifampidinihana tamin’ny minisitera misahana izany.
Navoitran’ny minisitry ny Indostria ny tokony hanajan’ny orinasa rehetra ny lalàna eto an-toerana, niaraha-nanaiky tamin’ny Sim. Nialoha ny nanokafana indray io orinasa io, nampahatsiahivina aminy ny tokony hanajana izany lalàna izany, toy ny lalàna mifehy ny tontolo iainana. Nambaran’ny ONE fa 60 % ny orinasa, tsy manao fanadihadiana izay lafiny fanajana ny tontolo iainana izay mialoha ny hisokafany. Io ny antony iray lehibe tsy voahajan’ny Tiko 3A. Antony lehibe faharoa, ny trosan’ity orinasa ity any amin’ny Jirama, mahatratra dimy miliara Ar. Notsiahivina tamin’ny tompon’andraikitra izany ary nanome toky izy ireo hanefa izany trosa izany, saingy tsy hita soritra.
Manohana ny lalàna tokony hohajain’ny indostria rehetra ny Sim. Tombontsoan’ny orinasa sy ny mpiasa ao aminy izany no tsy mamono antoka ny fanjakana. Ary tombontsoa ho an’ny rehetra ny fiarovana ny tontolo iainana. Koa heverina fa hahitana marimaritra iraisana ny hanokafana indray ny Tiko 3A any Andranomanelatra ny fihaonana teo amin’ny minisitra sy ny filohan’ny Sim, tsy misy idiran’ny politika. Ny orinasa malagasy, manana ny toerany sady tsy very asa ireo mpiasa ao aminy sy ireo hafa mifampiraharaha aminy.